Macluumaadka Sharciga Dhibbanayaasha Dambiga
Goobta Xulista / Maalgashadaha Goobta
U adeegida Bulshooyinka
Caawinta Guri La'aanta
U Doodista Xafiiska Dhibbanayaasha Dembiyada
Bulshooyinka Reer Miyiga
Xariirka Dawlada Hoose
Caawinta Tamarta Qoyska ee LIHEAP
Mashaariicda Raasumaalka Beesha
Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB)
Guddiga Howlaha Guud
Xafiiska Broadband State
Feejignaanta Qeybta Muhiimka ah
Adeegyada Ganacsiga Yaryar
Deeqaha Ganacsiga & Amaahda
Ergooyinka Caalamiga ah
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Dhibbanayaasha Dembiyada & Badbaadada Dadweynaha|U Doodista Xafiiska Dhibbanayaasha Dembiyada|Macluumaadka VOCA
Xeerka Dhibbanayaasha Dembiyada (VOCA) ee 1984 ayaa aasaasay Sanduuqa Dhibbanayaasha Dembiyada. Sanduuqa waxaa lagu maalgeliyaa ganaaxyada dambiyada ee federaalka, ganaaxyada, iyo dammaanadaha dammaanadda ee laga qaaday dowladda federaalka. Gobol kasta wuxuu qaataa lacagaha VOCA sanadkiiba si loogu taageero shakhsiyaadka ay saameeyeen fal-dambiyeed, waxyeello iyo waxyeelo.
OCVA waxay maalgelisaa barnaamijyada, Qabiilooyinka iyo ururada qabaa'ilka ee dhamaan Gobolka Washington kuwaas oo bixiya taageero iyo caawimaad shakhsiyaadka waxyeello soo gaadhay ama waxyeelloobay ama loo aqoonsaday inay yihiin dhibanayaal ama badbaado dambi.
Macluumaadka ku saabsan fursadaha deeqaha ee hadda, booqo OCVA Deeqaha iyo Maalgelinta websaydhka
Xaashida Xaqiiqda ee OCVA ee Dembiyada Dembiyada (VOCA)
Warbixin dheeraad ah:
Ballaadhinta Gaaritaanka Adeegyada Dhibbanayaasha: Kordhinta Awoodda Maalgelinta VOCA ee loogu talagalay badbaadayaasha aan mudnayn (website)
Codso Maalgelinta VOCA: Qalab loogu talagalay Ururada la Shaqeeya Badbaadada Dembiyada ee Bulshooyinka Midabka iyo Bulshooyinka Kale ee Aan Mudnayn (Pdf)
Sida loo Buuxiyo VOCA Warbixinta Abaalmarinta Subgrant (Cusub)
Sida loo Dhamaystiro Warbixinta Abaalmarinta Subgrant VOCA (Fiidiyow)
Barnaamijka Xarunta Adeegga Dhibbanayaasha Dembiyada
Ujeedada barnaamijka Xarunta Adeegga Dhibbanayaasha Dambiga waa in lagu taageero adeegyo la siiyo dhibbanayaasha fal-dambiyeedka, sida gacan ka hadal, dhac, xadgudub carruur ah, ku xadgudubka gawaadhida, dil baabuur, dambi hantiyeed, iyo badbaadayaal dil ka dhacay Gobolka Washington.
Kajawaabida baahida shucuureed iyo jir ahaaneed ee dhibanayaasha dambiga.
Caawinta dhibbanayaasha aasaasiga iyo kuwa sare ee dambiyada si loo dejiyo noloshooda ka dib dhibbane.
Ka caawi dhibbanayaasha inay fahmaan kana qaybgalaan nidaamka caddaaladda dembiyada.
Sii dhibbanayaasha dembi cabbir badbaado iyo deg-deg deg deg ah.
Barnaamijka U-doodista Sharciga ee Rabshadaha Qoyska
Barnaamijka U-doodista Sharciga ee Rabshadaha Qoyska (DVLA) wuxuu taageeraa isku dayga dhibbanaha si loo joojiyo xiriir gacan-ka-hadal ah iyadoo lala xisaabtamayo dambiilayaasha iyada oo loo marayo nidaamka caddaaladda dembiyada. Hadafku waa in la yareeyo dhacdooyinka rabshadaha qoyska iyada oo loo fududeynayo helitaanka dhibbanayaasha iyo ka-qayb-galka howlaha caddaaladda madaniga iyo dambiyada. Konton barnaamijyada rabshadaha guryaha ku saleysan ee bulshada ku saleysan waxay siisaa adeegyo toos ah dhibbanayaasha Washington oo dhan. U doodayaasha sharciga waxay xaqiijinayaan in badbaadada iyo xuquuqda dhibbanayaasha lagu ilaaliyo gudaha cadaalada ciqaabta iyo nidaamyada maxkamada madaniga ah iyagoo matalaya dhibanayaasha rabshada guriga iyo caruurtooda. Waxay ka caawiyaan dhibbanayaasha amarrada ka hortagga iyo dhibaataynta, furiinka iyo waraaqaha kala tagga, haynta carruurta ama amarrada booqashada, waxayna ka caawiyaan dhibbanayaasha inay helaan kaalmada dhaqaale iyo adeegyada bulshada.
Waa maxay Rabshada Guryaha?
Barnaamijka Weerarka Galmada
Sharci dejinta Gobolka Washington waxay aqoonsan tahay in daweynta iyo adeegyada ku filan dhibanaha faraxumeynta faraxumeynta kaliya aysan aheyn arin cadaalad u ah dhibanaha laakiin sidoo kale waa qaab looga hortago xadgudub dheeri ah. Iyadoo loo marayo xoojinta daaweynta iyo lacagaha adeegyada, kaalmada farsamada heer-gobol iyo taakuleyn, iyo hirgelinta heerarka aqoonsi ee gobolka oo dhan, adeegyada ku saleysan bulshada ee dhibbanayaasha faraxumeynta galmada ayaa ku koray mug iyo iswaafajin. Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay qandaraas la gashay 38 barnaamijyada xadgudubka galmada bulshada ee la aqoonsan yahay (CSAPs) si loogu dammaanad qaado marin u helista dhibbane kasta oo faraxumeyn ah ee Washington, qof weyn ama cunug, adeegyada faragelinta dhibaatooyinka, macluumaadka iyo u gudbinta, u doodista caafimaadka iyo sharciga. Qandaraasyadan ayaa sidoo kale taageera dadaallada CSAPs si ay u qabtaan howlaha ka hortagga iyo waxbarashada ee loogu talagalay in lagu yareeyo rabshadaha galmada ee bulshadooda. Qandaraasyo dheeri ah ayaa bixiya kooxaha taageerada iyo wax ka qabadka daaweynta.
Waa maxay faraxumaynta galmada?
Saraakiisha Tababarka Adeegyada Xeer-ilaaliyeyaasha (STOP) Barnaamijka Deeqda
Barnaamijka Kaalmaynta Foomka ee 'STOP Rabshadaha ka dhanka ah Haweenka' wuxuu ka dhigayaa nidaamka cadaaladda dambiyada inuu si wax ku ool ah ugu shaqeeyo dhibbanayaasha rabshadaha qoyska, rabshadaha shukaansiga, faraxumeynta galmada, iyo dabagalka. Ujeeddada barnaamijku waa in la kordhiyo nabadgelyada dhibbanayaasha degmo kasta, iyada oo la xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya fulinta sharciga, nidaamyada maxkamadda, iyo u-doodayaasha dhibbanayaasha.
Unugyada Caawinta Markhaatiga Dhibbanaha
Barnaamijka Caawinta Markhaatiga Dhibbanaha wuxuu siiyaa u doodayaal tababbaran si ay u caawiyaan dhibbanayaasha dembiga inta lagu guda jiro baaritaanka iyo dacwadda dambiga. Xafiis kasta oo xeer ilaaliye oo ku yaal Washington wuxuu leeyahay barnaamij ku saleysan Nidaamka Markhaatiga Dhibbanaha oo ay heli karaan dhibbanayaasha iyo markhaatiyaasha dambiga.
Qorshaha Gobolka ee Dhibanayaasha Dembiyada (VOCA)
OCVA waxay u adeegtaa sidii maamule maaliyadeed ee federaalka VOCA Assistance. Horraantii 2015, isbeddelka koongareesku wuxuu keenay koror weyn oo ku yimid abaalmarinta Gobolka Washington ee maalgelinta marin-dhaafka ah.
In 2015, geedi socodka qorshaynta gobolka oo dhan ayaa loo isticmaalay in lagu hago horumarinta ah 2015-2019 Qorshaha Gobolka VOCA (PDF) iyo dejinta talooyin si loo hago isticmaalka lacagaha loo kordhiyay VOCA illaa iyo 2019.
Marka laga wada hadlo horumarka ilaa maanta iyo falanqaynta xogta la soo aruuriyay, OCVA waxay go'aansatay inay sii waddo qorshihii asalka ahaa ee 2015-2019 VOCA ilaa 2023.
Kordhinta qorshaha qaybinta maalgelinta VOCA ee asalka ah ayaa ogolaan doonta:
Barnaamijyada cusub ee la maalgeliyo si ay si buuxda u fuliyaan soo jeedintooda
Wareegyo codsiyo dheeri ah oo loogu talagalay dadaalkeenna cusub ee tartanka
Waqti ku filan oo loogu talagalay in si dhammaystiran loo eego bal in qorshuhu keenay in la buuxiyo dulduleelada lagu qeexay qiimeynta baahiyaha hore ee la qabtay ka hor daabacaadda Qorshihii asalka ahaa ee VOCA.
2018, OCVA waxay sameysay sahan iyo kulan daneeyayaasha gobolka oo dhan si looga codsado fikradaha ku saabsan sii socoshada qorshaha VOCA. Labaduba waxay xaqiijiyeen in mudnaanta lagu tilmaamay geedi socodka qorshaynta VOCA 2015-2019 in la kordhiyo illaa 2023.
Xiriirinta Barnaamijka OCVA
Kheyraadka Dhibanaha Dembiyada
Deeqo iyo Maalgelin
Ka ganacsiga dadka
Barnaamijka Badbaadada iyo Helitaanka Dhibbanayaasha Muhaajiriinta
Imtixaaneeyayaasha Kalkaalisada Weerarka Galmada (SANE) Hababka ugufiican
Caawinta Markhaatiga Dhibbanaha
Macluumaadka Dhibbanayaasha Dambiga (VOCA)
Guudmarka Taariikhda VOCA (PDF)
Xeerka Barnaamijka VOCA (PDF)
Qorshaha Gobolka VOCA 2015-2019 (PDF)
Warbixinta Horumarinta Istaraatiijiyada VOCA 2019 (PDF)
Haddii aad tahay dhibbane dambi oo aad raadineyso adeegyo:
Khadka Tooska ah ee Adeegga: 1-800-822-1067
Goobta Xulista / Maalgashadayaasha Goobta
Codsiga Diiwaanka Dadweynaha
Goobaha Kale ee Gobolka
Si aad uqorto cusbooneysiinta ama aad uhesho dookhaaga macaamiisha, fadlan ku qor macluumaadka xiriirkaaga hoosta.
Email SMS / Text Text
1 (Mareykanka) 1
Ma heli kartaa waxaad raadineysay? Halkan guji.
Facebook Twitter Instagram LinkedIn Dhexdhexaad
2017 © Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Ka Bax Degdeg ah